दम्पतीले दुई बच्चासहित त्रिशुलीमा हा’मफा’ले, हा’मफा’ल्नुको र’ हस्य यस्तो…. - News20 Media
January 17, 2020 N20LeaveaComment on दम्पतीले दुई बच्चासहित त्रिशुलीमा हा’मफा’ले, हा’मफा’ल्नुको र’ हस्य यस्तो….
काठमाडौं : थानकोट घर भएका बिनय लामिछानेको दम्पत्तिले आफ्ना दुई नाबालक सन्तानसहित बिहिवार साँझ त्रिशुली न’दिमा हा’मफालेका छन् । घ’टनामा श्रीमानको उद्धा’र गरिएको छ भने श्रीमती जमुना रेग्मी (लामिछाने) को मृ’त्यु भएको छ साथै दुई नाबा’लक बेप’त्ता भएका छन् ।
नदिमा हाम’फाले लगत्तै प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीलाई खवर गरेपछि स्थानीय र्याफ्टिङ गर्ने समुह लिई प्रहरीले बिनयलाई जीवित उद्धार गर्न सफल भएपनि जमुनाको भने मृ’त्यु भइ’सकेपछि श’व फेला पारेकोे छ । घटनामा २ वर्षीय र ६ महिने बालक बे’पत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार उद्धार गरिएका अन्दाजी ३८ बर्षिय श्रीमान बिनयलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
आत्मह’त्या गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण खुलेको छैन । यद्यपि जमुनाले फेसबुक स्टाटसमा लेखे अनुसार मिटर ब्याजमा रकम लिएको र सोको ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्न रकमधनीले दवा’व दिएपछि सामू’हिक आ’त्मह”त्या गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । जमुनाले चलाएको फेसबुकमा गत जनवरी ४ मा थानकोटमा नयाँ डिएसपी आएको मिटरब्याजमा ऋण दिएर ब्याज तिर्न नसक्नेलाई मर्न बा’ध्य बनाउने गि’रोहलाई कारवाही गर्न माग गरेकी थिईन् । उनले ब्याजका अपरा,धीको द’वाव थेग्न नसकेपछि कारवा’ही हुने आशामा त्यस्तो स्टाटस राखेका हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो । मकवानपुरका चित्लाङमा जन्मेमा लामिछाने हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत थानकोटमा बस्दै आएका थिए ।